FIVORIANA ARAK'ASA NOTARIHIN'NY PRAIMINISITRA , ARY NATREHIN'NY MINISITRA SY IREO TOMPON'ANDRAIKITRA ISAN-TSOKAJINY EO ANIVON'NY MINISTERAN'NY TOEKARENA SY NY TETI-BOLA:
Alakamisy, 8 Aogositra 2019
Nitohy teo anivon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetibola ny fivoriana arak’asa ho fametrahana ny fomba fiasa vaovao sy ny fandrindrana ny asa ary ny fampitoviana fomba fijery amin’ny fanatanterahana ireo andraikitra sahanin’ny ministera, izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian ary natrehin’ny Minisitra, Randriamandrato Richard sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetibola.
Nohamafisin’ny Praiminisitra hatrany ny tokony hametrahana ny fanovàna eo amin’ny fomba fitantanana indrindra fa ity ministera ity, izay miandraikitra ny fitantanana sy ny fampidiram-bola ao anatin’ny kitapom-bolam-panjakana, ny tanjona hoy izy dia ny hisian’ny fandrindrana maty paika eo amin’ny fomba fiasan’ny governemanta sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny hifanaraka amin’ny vinam-pampandrosoana napetraky ny Filohan’ny Repoblika.
Anisan’ny ministera ivo ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetibola amin’ny alalan’ireo sampan-draharaha goavana misy eo aminy, izay iankinan’ny fampandehanana sy ny fanatanterahana ny raharaham-panjakana sahanin’ireo ministera samihafa. Nambaran’ny Praiminisitra fa ireo sampan-draharaha misy eo anivon’ity ministera ity, dia fitaovana eo am-pelantanan’ireo ministera hampiasaina amin’ny fanatanterahana ireo andraikitra sy asa izay tapaka sy nolaniana eo anivon’ny filankevitry ny minisitra sy ny filankevitry ny governemanta ho entina hanatrarana tanjona.
Noho izany, ilaina hoy izy ny fanafainganana ny fikarakarana ireo atontan-taratasy mikasika ny fandaniana sy ny fampidiram-bola eo anivon’ny fanjakana, fanatsarana izay atao mifanaraka amin’ireo rijan-teny mifehy izany. Ka ezahina ny hanatrarana ny taham-pampiasam-bola ho an’ny tetibola 2019 ho 100% raha mbola 30% izany amin’izao fotoana izao, indrindra ny famatsiana ireo tetikasa laharam-pahamehana. Izany anefa tsy manakana ny fanarahamaso atao amin’ny fampiasana ny volam-panjakana fa vao maika hihamafy hatrany ny fitsirihana indrindra eo amin’ny fanolorana ny tsenan’ny asam-panjakana. Mila jerena ihany koa hoy ny Praiminisitra ny fanatsarana ny fampidiram-bolam-panjakana amin’ny alalan’ny sampandraharahan’ny hetra sy ny fadin-tseranana. Tokony ampidirina amin’ny sehatry ny ara-dalàna ireo seha-pihariana hafa toy ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany madinika sy ny fambolena ireo vokatra fanondrana, misy ny hetra alohan’izy ireny saingy tsy miditra ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana izany. Mitaky tamberin’andraikitra kosa izany amin’ny fampandrosoana ireo toerana ahitana izany, araky ny nambarany.
Eo amin’ny fadin-tseranana indray dia nilaza ny Praiminisitra fa tokony ho hafainganina ny famoahana ireo entana mba hampaharisika ireo mpandraharaha ka hampiroborobo ireo orinasa mpanafatra entana ary hampihena ny vidin’entana tonga eny amin’ireo mpanjifa, indrindra fa ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavan’andro.
Mikasika ny « e governance », hita fa efa miditra amin’ny fanatsarana ny fitantanana amin’alalan’ireo fampiasana ny rindrambaiko samihafa isika ankehitriny ; nambaran’ny Praiministra fa tokony hanaraka ny lamina apetraky ny Ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisandavitra ary ny fampivoharana ny haitao ara-kajy mirindra ny ministera tsirairay mba hampitovy ny tahirin-kevitra hananana ka ahafahana mampiasa izany amin’ny tokony ilaina azy amin’ny fotoana rehetra ; fandaminana izay apetraka mba ialana amin’ny hosoka sy ny kolikoly mba isian’ny mangarahara amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin’ny sehatra rehetra.
Maridrefy iray ahafahana milaza fa mandroso ihany koa ny asa, ny tsy fisian’ ny fitokonana samihafa mety mampikatso ny fiainam-pirenena.
Primature - Lapan' i Mahazoarivo